Taunggyi Times (တောင်ကြီးတိုင်းမ်)
This only happen in Burma (Myanmar). Soldiers and police patrolling on the city streets at night, terrorizing civilians, shooting into residential home and destroying public properties and vehicles on the streets. These are polices and soldiers living on tax payer money means to protect people. What they do now in Burma is worse than street thugs. This isacrime, this is lawlessness, this is inhumane. They are criminal.
ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်နဲ့ ဘ၀လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်စောင့်လျှောက်ဖို့ ပြည်သူပေးတဲ့ လစာကိုစားပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို ပြန်ပြီးအမျိုးအမျိုးနှိက်စက်ညင်းပန်းနေတာ။ အပစ်မဲ့တဲ့အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ်စည်းကို လိုက်လံဖျက်ဆီး လမ်းမှာတွေ့ရာလူကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်နေတာ လူဆိုးလူမိုက် လူရမ်းကားတွေထက် ဆိုး၀ါးလုပ်ရပ်တွေဖြစ်တယ်။ လက်မခံနိုင်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။
Documentary: Story of Land Confiscation in HsiHseng Township, Burma
ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ စစ်တပ်မတရားသိမ်းစည်းထားသည့်မြေပေါ် မူလမြေယာပိုင်ရှင်များ၀◌င်ရောက်စိုက်ပျိုးခြင်း
ခမ်းသားငေါ၀်းသတင်းဌာနမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှုအစီအစဥ် ဇွန်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် ၂၀၁၈ ခု ရက်စွဲဖြင့် RCSS/SSA ပိုင် Tai Freedom စာမျက်နှာမှာတင်တဲ့ ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း ရှမ်းကျောင်းသူ ၂ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ မဟုတ်မမှန် သတင်းအလိမ်အညာဖြစ်ကြောင်း သိစေလိုပါတယ်။ ယခုလိုလုပ်ကြံသတင်းတွေဟာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကို ရည်ရွယ်ရှိရှိနဲ့ သမြင်ဖန်တီးနေပါတယ်။ RCSS/SSA အနေနဲ့ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတာတွေဟာ အထူးရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။